Eyona nto igqwesileyo kuzo zonke iZityalo zoLwahlulo zoMoya eziLiquid kunye neFactory |GreenFir
Iyunithi yokwahlula komoya (ASU) yinkqubo edityanisiweyo kwezinye iinkqubo ezininzi ngenxa yokubaluleka kweegesi zayo kwiinkqubo ezininzi zoshishino.Ngokomzekelo, ioksijini isetyenziselwa iinkqubo zonyango kunye nezinye iinkqubo zoshishino ezifana nesinyithi, iglasi, i-ammonia, ukutsha kwe-oxy-fuel kunye ne-gasification edibeneyo yomjikelezo odibeneyo, i-nitrogen ifumana ukusetyenziswa kwimichiza, i-petroleum, ukutya, i-electronics industries, ngelixa i-argon isetyenziswa njenge-argon. igesi ekhuselayo engasebenziyo kwi-welding kunye nabanye.
Oku kudla ngokuthathwa njengesityalo sorhwebi.Yonke imveliso enqwenelekayo yenziwe incindi ukuze ithunyelwe kwiitreyila zothutho ze-cryogenic okanye iimoto zikaloliwe.Ngokubanzi, ezi yunithi zenza ulwelo Oxygen (LOX), ulwelo Nitrogen (LIN) kunye Argon engamanzi (LAR) ngaxeshanye okanye ngenye indlela.Ezi mveliso zihanjiswa kwiitanki ze-cryogenic kwindawo yabasebenzisi, apho ithi ifudunyezwe kwakhona kwirhasi ngaphambi kokusetyenziswa okanye isetyenziswe njengolwelo.Ngokuqhelekileyo abasebenzisi kuphela abasebenzisa iimveliso zolwelo zizikhenkcisi zokutya, iinkampani zenkonzo yasentsimini ye-oyile okanye ezinye iinkqubo ezifuna ubushushu obubandayo kakhulu.Izityalo ezifakwe kwi-skid zifakwe ngaphambili kwaye zifakwe kwimibhobho ye-compact, idizayini yemodyuli.Oku kuvumela ukwakhiwa kwebala lokuqala okanye ukufuduswa.Izityalo ezilulwelo zidla ngokulinganiswa ukuvelisa ukusuka kwiitoni ezi-5 ukuya kuma-400 ngosuku kwimveliso edityanisiweyo.
Amagqabantshintshi kuzo zonke iZityalo zeeMveliso eziManzi
● Ukwenza ngokwezifiso: Iyunithi nganye ilungiselelwe ngokwesicelo somthengi ukuze ihlangabezane neemfuno zomntu ngamnye.Zonke iiprojekthi zinokubonisa imingeni eyahlukeneyo ngokwezoqoqosho, amacandelo, kunye nokusebenza.Ngokusebenza ngokubambisana nomxhasi, umngeni ngamnye uhlalutywa kwaye ujongwe, okukhokelela kwisiphumo esihle kakhulu seprojekthi.
● Isisombululo esiguquguqukayo: Izityalo zingayilwa ukuvumela ukuguquguquka okuphezulu kweyunithi mhlawumbi ngokweemveliso, ukusetyenziswa kwamandla, ixesha lokufumaneka okanye imveliso epheleleyo.Olu phawu luvumela abathengi ukuba balandele ngcono ukuguquguquka kwemarike kunye nezicelo okanye izakhelo zeendleko zeenkonzo eziphucula imisebenzi eqhelekileyo.
● Ukuhlolwa komgangatho kunye nokusebenza kwiworkshop yeGreenFir.
● Inkqubo yolawulo yemeko yobugcisa eyenzelwe ukuvumela ukusebenza kweshifti yasebusuku engajongwanga evumela ukwenziwa kwe-remote, ukusombulula iingxaki kunye nokuqalisa kude kunye nokuqalisa okungajongwanga.
● Ukuthembeka okuphezulu ngenxa yokhuseleko oluphezulu lwezityalo kunye namava exesha elide ekuyilweni kwenkqubo, ubunjineli bezityalo kunye nokwakhiwa.
● Umgangatho ophezulu ngokusebenzisa inkqubo yokulawula umgangatho ngokwe-ISO 9001 standard.
Ubume besityalo esiqhelekileyo
Ulungelelwaniso olupheleleyo lwesityalo lubandakanya:
● I-compressor yomoya engundoqo (ii) apho umoya uxinzelelwe ukuya kuxinzelelo lwenkqubo efunekayo.
● Inkqubo yokupholisa kwangaphambili ukupholisa umoya ocinezelweyo.
● Icandelo lonyango lwangaphambili lokususwa kwe-H2O kunye ne-CO2.
● Ibhokisi ebandayo apho kwahlulwe umoya ukuze kufunyanwe iimveliso eziyimfuneko.
● Isandisi ukunika ifriji ukuvelisa ulwelo.
● I-Booster air compressor ukwandisa ngakumbi umoya oxinanisiweyo ovela kwi-MAC kwaye ibonelele ngomjelo ophikisanayo wokuphuma kwamanzi.
● Ugcino kunye nenkqubo yokubuyisela umphunga.
Ngaphambili: IiNkampani zokuVelisa iSikhululo sePetrol sokuzaliswa kwakhona kweGesi - iSikhululo sokugalela amafutha e-L-CNG – iGreenFir
Okulandelayo: I-ODM China Asu Cryogenic Air Separation Plant Liquid Nitrogen Plant
Isityalo sokwahlula umoya sahlula umoya we-atmospheri kwiinxalenye zawo eziphambili, i-nitrogen kunye neoksijini, kwaye ngamanye amaxesha kunye ne-argon kunye nezinye iigesi ezinqabileyo ezingenayo.Iiyunithi zokuhlukana komoya we-Cryogenic zidlala indima ebalulekileyo kwizicwangciso ezininzi zemizi-mveliso, ukubonelela ngezinga eliphezulu le-oksijeni ecocekileyo, i-nitrogen, kunye ne-argon, imveliso ye-liquid okanye i-gaseous, kwizicelo ezininzi ezibalulekileyo, ezifana nentsimbi kunye nentsimbi, amandla ombane, i-semlting yobhedu. , iikhemikhali, ukucocwa kweoli, amashishini eglasi kunye nokusetyenziswa kwezonyango.
IGreenFir iphuhlise ngempumelelo izisombululo zobugcisa ezisekelwe kulwazi lwangaphakathi kwiiyunithi zokwahlula umoya (ASU).Izityalo zisekelwe ekusebenziseni iteknoloji ye-cryogenic yokwahlulwa komoya ukwenzela ukuba ibe neemveliso, ngaxeshanye okanye ngenye indlela, kwi-gaseous okanye i-liquid form.
Ukwanelisa umthengi kakhulu, iGreenFir ivelisa iiyunithi zokwahlula umoya ngokweeprojekthi zomntu ngamnye kuthathelwa ingqalelo imveliso yazo kunye neziseko ezingundoqo ezikhoyo.Iiyunithi zisekelwe kuyilo lwesekethe yobugcisa kunye nezisombululo zobunjineli, ezigqitywe ngeeseti zendibano kunye neyunithi eyenziwe ngabavelisi abaphambili basekhaya nabangaphandle, kwaye ibonisa inqanaba eliphezulu lokuzisebenzela, ukuthembeka kunye nokusetyenziswa kwamandla athile aphantsi.Iiyunithi zomthamo ophantsi nophakathi zenziwa zipakishwe ngowona msebenzi uphezulu wokufumaneka.
IGreenFir ibonelela ngewaranti kunye nenkonzo yasemva kwentengiso yee-ASUs zayo, kwaye ibonelela ngamacandelo abo bonke ubomi benkonzo.
Yonke i-Gaseous Air Separation Plant
Iplanti edityanisiweyo yoLwalo kunye neGesi yoLwahlulo loMoya